မေဆွန်မောင့် - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် ချဲလ်ဆီး၌ မောင့်ကစားစဉ်
မေဆွန် တိုနီ မောင့်
(1999-01-10) ၁၀ ဇန်နဝါရီ၊ ၁၉၉၉ (အသက် ၂၂)
၅ ပေ ၁၀ လက်မ (၁.၇၈ မီတာ)
အသင်း ကစားပွဲ† (သွင်းဂိုး)†
ချဲလ်ဆီး 37 (7)
→ ဗီတက်ဆီ (အငှား) 29 (9)
→ ဒါဘီကောင်တီ (အငှား) 35 (8)
အင်္ဂလန် U16[ကိုးကားချက်လိုသည်]5(0)
အင်္ဂလန် U17[ကိုးကားချက်လိုသည်]9(2)
အင်္ဂလန် U18[ကိုးကားချက်လိုသည်]5(3)
အင်္ဂလန် U19 16 (7)
အင်္ဂလန် U214(1)
အင်္ဂလန်6(1)
* ဂိုးအရေအတွက်ကို ကလပ်အသင်းကြီး ကစားခြင်းနှင့်
ပြည်တွင်းလိဂ်အတွက်သာ ရေတွက်ပြီး 22:03, 26 July 2020 (UTC)အထိ ဖြစ်သည်။
† ကစားသည့် ပွဲအရေအတွက် (သွင်းဂိုး)
‡ 20:07, 17 November 2019 (UTC) အထိ နိုင်ငံကိုယ်စားပြုပွဲနှင့် သွင်းဂိုးများ
မေဆွန် တိုနီ မောင့် (၁၉၉၉ ဇန်နဝါရီ ၁၀ တွင်မွေးဖွားသည်) အင်္ဂလိပ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ် ချဲလ်ဆီးနှင့်အင်္ဂလန်အမျိုးသားဘောလုံးအသင်းတို့အတွက် ကွင်းလယ်လူအဖြစ် ကစားသည်။
သူသည် အသက် (၆) နှစ်အရွယ်တွင် ချဲလ်ဆီးသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး သူ၏အဆင့်မြင့်တန်း အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို မစတင်မီ ဒတ်ခ်ျ Eredivisie နှင့် ဒါဘီကောင်တီရှိ ဗီတက်ဆီအသင်းသို့ အငှားထွက်ခွာကစားခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်မှချယ်လ်ဆီးအသင်းကြီးတွင် စတင်ကစားခဲ့သည်။
၁.၁.၂ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ရာသီ: ပထမအသင်းကြီးသို့ ဝင်ရောက်နိုင်မှု
၂၀၁၆တွင် ချဲလ်ဆီး U18၌ ကစားစဉ်
မောင့်သည် ဟမ့်ပ်ရှိုင်းယား ပြည်နယ်၊ ပိုစ့်မောင့်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူ၏ဖခင်တိုနီသည် ဟာဗန့်မြို့အသင်း ကဲ့သို့သော လိဂ်အဆင့်မဟုတ်သောရှိ ဒေသခံကလပ်များတွင် ကစားသမားနှင့်မန်နေဂျာဖြစ်သည်။ သူသည်ဒေသခံလိဂ်ဘောလုံးများတွင် အသက် ၄ နှစ်အရွယ်ကစားသမားဖြစ်ပြီး ၆ နှစ်အောက်ဘောလုံးအဆင့်တွင် ကစားနေသူဖြစ်ပြီး ပို့စ်မောက်၊ ဆောက်သမ်တန်နှင့်ချဲလ်ဆီးအသင်းများ၏အကယ်ဒမီလေ့ကျင့်မှုများတွင် တစ်ပတ်လျှင်တစ်ရက်လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ မောင့်သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ် အသက် (၆) နှစ်အရွယ်တွင် ချဲလ်ဆီးသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူသည် ၂၀၁၃-၁၄ ရာသီတွင် အသက် ၁၅ နှစ်အောက်လူငယ်ကစားသမားအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပြီး နောက်ရာသီတွင် နောက်ထပ်ပွဲများစွာထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့သည်။ သူသည် ၂၀၁၆-၁၇ရာသီ၌ အသက် ၁၈နှစ်အောက်နှင့် အသက် ၂၁အောက် အသင်းတို့တွင် ပွဲချိန် ၃၀ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၁၀ ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ သူသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင် ချဲလ်ဆီးနှင့်လေးနှစ်စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ရာသီ: ပထမအသင်းကြီးသို့ ဝင်ရောက်နိုင်မှု[ပြင်ဆင်ရန်]
ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် ၂၀၁၉ တွင် ချဲလ်ဆီးနှင့်ငါးနှစ်စာချုပ် အသစ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ သူသည် ဩဂုတ်လ (၁၁) ရက်နေ့တွင် ပရီးမီးယားလိဂ်၌ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို (၀ - ၄) ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည့်ပွဲတွင် ချယ်လ်ဆီးအသင်းကြီး အတွက် ပထမဆုံးပွဲထွက်ခဲ့သည်။ သူသည် တစ်ပတ်အကြာတွင် သူ၏ပထမဆုံးချဲလ်ဆီးဂိုးကို စတန်းဖို့တံတားကွင်းတွင် မန်နေဂျာအဖြစ် ဖရန့်လမ်းပတ်နှင့်အတူ ၁-၁ သရေကျခဲ့သော လက်စတာစီးတီးကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် နောက်တစ်ပွဲ နော့ဝရှ်စီးတီးသို့ ထပ်မံဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ ၁၇ တွင် သူသည် ချန်ပီယံလိဂ်ဖွင့်ပွဲ၌ ဗလင်စီယာနှင့် ကစားသည့်ပွဲတွင် ခြေကျင်းဝတ်ဒဏ်ရာခံစားခဲ့ရသည်။
၂၀၂၀၊ မတ်လတွင် မောင့်သည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်း မိမိကိုယ်ကိုသီးသန့်နေစေသည့်စည်းမျဉ်းများကို လျစ်လျူရှုခဲ့သဖြင့် ချဲလ်ဆီးအသင်းက သတိပေးခဲ့သည်။ Callum Hudson-Odoi ကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် တွေ့ရှိခဲ့သည့်အတွက် အသင်းတစ်စုလုံးကို သီးခြားခွဲထုတ်ထားချိန်တွင် မောင့်သည် ဝက်စ်ဟမ်းကစားသမား ဒီကလန် ရိုက်စ် အပါအဝင်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ ဘောလုံးကစားရန်သွားခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဇူလိုင် ၂၂ တွင် သူသည် ချယ်လ်ဆီးအကယ်ဒမီအသင်းမှ အသင်းကြီးတွင် ပွဲထွက်ပါဝင်ခဲ့သည့် ပထမဆုံးရာသီတွင် ပွဲစဉ် ၅၀ ကစားခဲ့ရသည့် ပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ ပရီးမီးယားလိဂ်၏နောက်ဆုံးနေ့တွင် ကစားသည့် ဝူးဘ်အသင်းနှင့်ပွဲတွင် မောင့်သည် ချဲလ်ဆီးကို လာမည့်ရာသီအတွက် ချန်ပီယံလိဂ်တွင် နေရာရရှိစေရန် အလွတ်တည်ကန်ဘောမှ သွင်းယူခဲ့သည်။
↑ List of players under written contract registered between 01/04/2017 and 30/04/2017 (PDF)။ The Football Association။ 10 February 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mason Mount။ Derby County F.C.။ 31 March 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 October 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mason Mount။ AFS Enterprises။ 10 October 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ England's matches: The under 19's: 2010–20 (9 April 2019)။ 20 July 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ England's matches: The under 21's: 2010–20 (9 September 2019)။6October 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Marshman၊ Jeff။ "Portsmouth-born talent signs for Chelsea"၊ 15 January 2016။ 10 October 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇.၀ ၇.၁ Mason Mount: How midfielder ended Chelsea's long wait for homegrown star, BBC Sport, 8 April 2020
↑ De Bont၊ Stef။ "Mason Mount, Vitesse-pareltje dat uitzondering op Chelsea-regel moet worden" (in Dutch)၊ 14 December 2017။ 10 October 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Chelsea starlet Mason Mount signs new five-year contract after impressing on loan with Frank Lampard at Derby County"၊ Talksport၊ 15 July 2019။ 22 August 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ "Mount added: "I joined this club at six-years-old and it was always my goal to play for the first-team one day."
↑ Mount signs new deal and heads to Vitesse။ Chelsea F.C. (24 July 2017)။7October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ MASON MOUNT COMMITS TO CHELSEA WITH NEW CONTRACT SIGNED။ Chelsea F.C. (15 July 2019)။ 16 July 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mason Mount: Chelsea midfielder signs five-year contract (15 July 2019)။
↑ REPORT: MAN UNITED4CHELSEA 0။ Chelsea F.C. (11 August 2019)။ 11 August 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chelsea 1-1 Leicester City: Mount hits the heights before Foxes bite back (18 August 2019)။
↑ MATCH REPORT: NORWICH CITY2CHELSEA3(24 August 2019)။
↑ Mason Mount injury: Chelsea to assess ankle over next 48 hours။ BBC Sport (17 September 2019)။
↑ "Chelsea act after Mason Mount ignores coronavirus self-isolation advice"၊ The Guardian၊ 16 March 2020။5April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ TEAM NEWS: LIVERPOOL VS CHELSEA။ chelseafc.com (22 July 2020)။
↑ Mason Mount and Olivier Giroud sink Wolves and seal fourth place for Chelsea (26 July 2020)။ 26 July 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မေဆွန်မောင့်&oldid=624367" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၁:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။